सामसुङ कोरियाका उपाध्यक्षलाई पक्राउ पुर्जी जारी गर्न अदालतद्वारा अस्वीकार – Korea Pati
सामसुङ कोरियाका उपाध्यक्षलाई पक्राउ पुर्जी जारी गर्न अदालतद्वारा अस्वीकार
June 11, 2020 गुरुदत्त न्यौपानेLeaveaComment on सामसुङ कोरियाका उपाध्यक्षलाई पक्राउ पुर्जी जारी गर्न अदालतद्वारा अस्वीकार
दक्षिण कोरियाको अदालतले सामसुङ कम्पनीको नेतृत्व गरिरहेका उपाध्यक्ष जे वाइ ली विरुद्ध पक्राउ पुर्जी गर्न अस्विकार गरेको छ ।
ठगी तथा शेयर बजारमा धाँधली गरेको अभियोगमा सरकारी अभियोजकले दायर गरेको मुद्दामा अदालतले पक्राउ पुर्जी जारी नगरेको हो ।
यसबाट सामसुङका उपाध्यप ली लाई तत्कालका लागि राहत मिलेको छ । तर आगामी दिनमा मुद्दाको सुनुवाई अघि बढ्दै जाँदा उनीमाथि थप दबाब सिर्जना हुने बताइएको छ । उता कम्पनीका उपाध्यक्ष पक्राउ पर्नबाट जोगिएको घटनासँगै मंगलबार सामसुङ इलेक्ट्रोनिक्स, सामसुङ बायोलोजिक्स, सामसुङ सि एण्ड टी लगायतका सामसुङ ग्रुपका सबै कम्पनीहरुको शेयर मूल्यमा वृद्धि भएको छ ।
अदालतको निर्णयलाई अभियोजकहरुले खेदपूर्ण भन्दै अदालती आदेशका बाबजुत उनीमाथिको अनुसन्धान जारी रहने बताएका छन् । साथै थप अनुसन्धान पश्चात् पुनः पक्राउ पुर्जीको माग गर्दै अदालतमा अपिल गरिने पनि उनीहरुको भनाई छ ।
ली का वकिलले भने उनीमाथिको अभियोगका बारेमा बाह्य प्यानलबाट पूर्ण समीक्षा गरी अभियोग प्रमाणित हुने नहुने कुराको निर्णय हुनुपर्ने बताएका छन् ।
सन् २०१५ मा सामसुङ र चेइल इन्डस्ट्रीजबीच ८ अर्ब डलरमा भएको मर्जर अगाडि अवैधानिक रुपमा कारोबार गर्नुका साथै शेयर मूल्यमा हस्तक्षेप गरेको ली माथि आरोप छ । मर्जर पश्चात् लीले सामसुङमा आफ्नो पकड बलियो बनाउँदै लगेका थिए ।
स्मरण रहोस् २०१८ मा घुसकाण्डमा परी ली एक वर्षसम्म जेल परेका थिए । उनले दुई कम्पनीबीचको मर्जरलाई सरकारी समर्थन जुटाउनका लागि राष्ट्रपतिका एक विश्वासपात्रकी छोरीलाई घोडा उपहार दिएको आरोप लागेको थियो । तर तल्लो अदालतको फैसला सर्वोच्च अदालतले उल्टाएसँगै उनी जेलमुक्त भएका थिए । एजेन्सी
पहिलो फ्लाइटबाट कुवेतका नेपाली काठमाडौं आइपुगे
जापानले दैनिक २५० विदेशीलाई आउन दिने
कोरियामा हुनुहुन्छ? पासपोर्ट नविकरण गर्नुपर्यो?पेश गर्नुपर्ने डकुमेन्टहरु के के हुन? (पुरा हेर्नुहोस)
November 12, 2021 गुरुदत्त न्यौपाने
कोरोनाबाट निको भएर पुन: सङक्रमण भएकाहरु बाट कोरोना अरुमा नसर्ने !
पाँच बर्ष कोरियामा दु:ख गरेर फर्किएका यूवकको स्कुटर दृ’घटनामा मृ’त्यु!
November 18, 2021 November 18, 2021 गुरुदत्त न्यौपाने